Manavao na mametaka macOS Catalina vaovao avy hatrany? | Avy amin'ny mac aho
Tsy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo fanontaniana apetraky ny mpampiasa bebe kokoa raha vantany vao navoakan'ny orinasa Cupertino amin'ny fomba ofisialy ny kinova manaraka ny rafitry ny fikirakirana ho an'ny Mac. Efa mampandroso anao izahay fa somary sarotra ny mamaly ny fanontaniana ary miankina amin'ny maro izany. lafin-javatra izay atolotray Apetraho amin'ny Mac-nao ny kinova macOS Catalina vaovao na tsia.
Azo antoka fa maro amin'ireo nanatrika teo no nanontany an'io fanontaniana io isaky ny kinova vaovao an'ny macOS izay avoaka isan-taona ary ny valiny dia mitovy foana amin'ny tranga rehetra. mamaly ny tenany amin'ny fanontaniana bebe kokoa.
Elaela ve ianao tsy nanavao ny fitaovanao tamin'ny voalohany? Mety ve ny macOS Mojave? Mandra-pahoviana ianao no tsy nametraka macOS tamin'ny rangotra?
Ireo dia ho telo amin'ireo fanontaniana lehibe amin'ny endrika valiny momba ny fametrahana aotra amin'ny solosainao. Ary miankina amin'ny kinova izay anananao raha tsy apetrakao avy hatrany, ny solosaina dia afaka misintona rakitra maromaro, bibikely ary zavatra hafa, noho izany Zava-dehibe ny fahalalana hatramin'ny daty inona no mbola tsy nametrahana fametrahana madio ny rafitra.
Avy eo isika dia afaka miresaka momba ny fiasan'ny ekipa ankehitriny. Moa ve mivoaka amin'ny avana imbetsaka ilay "baolina kely" falifaly? Misy fampiharana na fitaovana manome anao tsy fahombiazana? Tsara ve ny fahombiazan'ny Mac manontolo? Tena antitra ve ny Mac-nao? Amin'ireto fanontaniana ireto dia mahazo hevitra momba ny filana mametraka azy isika na tsia, ny mazava dia tsy mitovy amin'ny fitaovana rehetra ka. ny valiny mahazatra dia tsy hanampy antsika.
Ny fomban'ireo mpampiasa dia iray amin'ireo valiny azonay omena amin'ity lohahevitra ity. Androany ary mahita ny fanatsarana ny Apple OS tsy dia zava-dehibe loatra intsony izao ny fanaovana io fametrahana io amin'ny volo fa azo atao ny manana an'io fahazarana io isaky ny misy OS vaovao tonga ary noho izany ny valiny amin'izany dia ny manohizanao azy satria tsy dia sarotra loatra ny manao ny fametrahana madio ary kely kokoa rehefa eo am-pelatanantsika izy io. Etsy ankilany, misy ny mpampiasa izay tsy manana hadisoana ary noho izany ny fametrahana amin'ny rafitra ankehitriny dia tsy hisy fiantraikany amin'ny asan'ny Mac. Araka ny nolazaiko tany am-piandohana dia miankina amin'ny lafin-javatra maro izany, fa amin'izao fotoana izao dia tsy lava kokoa ny asa tsy maintsy atao mba hametrahana fametrahana avy am-boalohany rehefa tonga ny kinova vaovao ny rafitra.
Manakaiky ny fisian'ity fanavaozana ity ho an'ny Macs izahay sy ianao Hiditra avy hatrany am-boalohany ve ianao sa hanavao ny Mac anao mivantana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Catalina » Manavao na mametaka macOS Catalina vaovao avy hatrany?
Flash dia hoy izy:
Mazava ho azy fa raha MacOS dia 100% 64bits, raha tsy misy fanohanana ny fampiharana 32-bit, dia tsara ny manao fametrahana madio ary esory ny fako rehetra avy amin'ny tranomboky sy programa tsy misy ilana azy.
Raha ny fahitanao azy dia i Catalina, no voalohany manakana ny fampiharana 32bits, fa tsy afaka mamono azy ireo.
Valio ny Flash
Manana Mac 20-inch aho, Mid OS X 10.9.5 (13F1911) 2,26 GHz Intel Core 2 Duo processeur, 6 GB 1067 MHz DDR3 memory, sary NVIDIA GeForce 9400 256 MB ary tsy mamela ny fanavaozana an'i Catalina na zavatra hafa…. Ahoana ny fomba tsy hanandramana fametrahana madio, raha ny paoma mihitsy no manery anao hanao izany ...
Ny valim-bola Q4 an'ny Apple dia hambara amin'ny 30 Oktobra
Sarimihetsika telo no voamarina fa havoaka amin'ny sinema aloha kokoa noho ny amin'ny Apple TV + amin'ity taona ity.